The Lego ရုပ်ရှင် ၂: ဒုတိယအချက်art Hamleys သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်ဇာတ်ကောင်
12 / 02 / 2019 12 / 02 / 2019 ဂရေဟမ် 1177 Views စာ0မှတ်ချက် အဖြစ်အပျက်, ပန်းချီဆရာ, Lego, The Lego ရုပ်ရှင် 2, The Lego ရုပ်ရှင် ၂: ဒုတိယအချက်art, Warner Bros.
နာမည်ကြီးလန်ဒန်ကစားစရာစတိုးဆိုင် Hamleys သည် The မှ Emmet, Lucy နှင့် Sweet Mayhem တို့ကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပမည်ဖြစ်သည် Lego ရုပ်ရှင် 2: ဒုတိယ Part.
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ မှတနင်္ဂနွေဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ အထိဇာတ်ကောင်သုံး ဦး ပါ The Lego ရုပ်ရှင် ၂: ဒုတိယအချက်art Hamleys မှာပေါ်ထွန်းလိမ့်မည်။ Regent Street တွင်ရှိသောလန်ဒန်ကစားစရာစတိုးဆိုင်တွင် Emmet၊ Lucy နှင့် Sweet Mayhem တို့ကတစ်နေ့လုံးကလေးများနှင့်တွေ့ဆုံရန်နှင့်ဓာတ်ပုံရိုက်ရန်အတွက်ပေါ်လာလိမ့်မည်။arty.
minရာမအသေးစားနှင့်အရုပ်ငယ်များသည်နေ့တိုင်း ၁ နာရီ၊ ညနေ ၂း၀၀ နာရီနှင့် ၃၀၀ နာရီတို့တွင်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ဇာတ်ကောင်ဘယ်မှာ, မြေညီထပ်ပေါ်လိမ့်မယ် Lego နိူးလည်းတစ် ဦး ရှာတွေ့နိုင်ပါသည် ပျော်စရာပြတင်းပေါက်မျက်နှာပြင် နောက်ဆုံးပေါ်ကာတွန်းရုပ်ရှင်ကိုဆက်ကပ်အပ်နှံသည်။
Hamleys The ၏ကျယ်ပြန့ရောင်းချနေသည် Lego ရုပ်ရှင် 2: ဒုတိယ Part အစုံများအပါအဝင်ထုတ်ကုန်များ၊ စုဆောင်းထားသောအသေးစား နှင့်စာအုပ်များ။ The Lego အပိုင်းသည်ပရိသတ်များလုပ်နိုင်သောပဉ္စမအထပ်တွင်တည်ရှိသည် တစ်ခုစွဲငြိဖွယ်ရာကမ္ဘာကြီးသို့ခြေလှမ်း လက်ဆွဲကစားရန်ဘူတာများနှင့်အလွန်ကြီးကြပ်သော Lego လန်ဒန်အိုင်ကွန်များပေါ်တွင်အခြေခံကျားကန်။
The Lego ရုပ်ရှင် ၂: ဒုတိယအချက်art ယခုရုပ်ရှင်ရုံ၌တည်ရှိ၏။
← Lego Ideas Flintstones အစုံသည်တိုယိုတာဗွီဒီယိုတစ်ခုရရှိသည်
Full LEGO Renault RS17 ပြိုင်ကားသည်ဒေါ်လာ ၁၀၈၀၀၀ ဖြင့်ရောင်းချသည် →